देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात !
केपी खनाल कक्षा ७ मा पढ्दा कैलालीको ‘रेडियो नमस्ते’ मा बाल कार्यक्रम चलाउँथे। हरेक शुक्रबार साँझको कार्यक्रमका लागि उनी लम्कीबाट टीकापुर ९१३ किमी० साइकलमा कुद्थे। त्यसरात त्यहीँ बस्थे र शनिबार घर फर्कन्थे। यसरी नै उनले २ वर्ष बिताए।
यो समय उनका लागि समाज र सामाजिक परिवेश बुझ्न निकै अर्थपूर्ण रह्यो। यसैक्रममा गाउँ–घरमा देखिएको एउटा दृश्यले उनको मन चसक्क छुन थाल्यो। गाई–भैंसी जथाभावी बाँध्ने, प्रयोग गरेका कपडा जथाभावी फाल्ने, विभिन्न चीज–वस्तु घर–वरिपरि फालेर गाउँ–घर फोहोर गरेको उनलाई मन परेन।
यी कुरामा सचेतना फैलाउन उनले स्कुल पढ्दा आफ्नो अगुवाईमा विद्यार्थीहरुको र्याली निकाले। गाउँ–घरमा पुगेर सचेतना फैलाए।
भारतमा भाँडा माझ्दा नदेखेको भविष्य
केपी घरको जेठो छोरा हुन्। उनी २ वर्षको हुँदा उनको परिवार जुम्लाबाट कैलाली झरेको थियो। उनीमुनि १ भाई र १ बहिनी छन्। उनका बुबाले भारतमा चौकिदारी गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। विगत केही वर्षदेखि आमा पनि उतै मजदुरी गर्छिन्।
तर, सोचेजस्तो सजिलो कहाँ थियो ररु उनी भारत गएको १ महिनासम्म भौतारिए। बल्लतल्ल बुबाले चिनेको एक होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाए। मुम्बईको मीरा रोडको अभिषेक रेस्टुरेन्टमा बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म उनका कलिला हातले भाँडा धस्काउन थाले।
कृष्ण आचार्य नेपालखबर